China Three Face Turning Lathe orinasa sy mpanamboatra | Oturn
(1) Ny masininay rehetra dia manome sakafo miaraka amin'ny Huadian CNC Controller （na Siemens, Fanuc）, dia afaka mahazo rohy spindle roa avy eo ary mamarana ny fikarakarana Bore-hole, Screw thread ary Sphere. Ny Controller CNC dia manana mifanentana tsara, miasa mahery ary miasa mora.
(2) Ny torolàlana momba ny latabatra Feed Sliding dia mampiasa vy fanariana volondavenona avo lenta, fantsom-bozaka henjana, fanalefahana ary fitsaboana efa antitra intelo. Esory tanteraka ny adin-tsaina ao anatiny, ny faran'ny làlan'ny torolàlana dia mandray ny famonoana audio super ary mihatra amin'ny HRC55 ny henjana. Amin'ny alàlan'ny fanodinana fikosoham-bolo avo lenta, hahazoana antoka fa marina, henjana, marin-toerana.
(3) Ny ampahany fandefasana dia mampiasa volom-borona marina sy interpolation mba hialana amin'ny banga, mba hiantohana ny fiatoana milina maharitra.
(4) Ny lohan-kery dia miaraka amin'ny fanovana hafainganam-pandeha telo-dingana miaraka amin'ny motera mahery vaika, mahatratra haingam-pandeha ambany fa avo torque, mahazaka enta-mavesatra fanapahana, manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana.
(5) Ny fitaovana miasa dia mandray ny fanamafisam-peo mandeha ho azy, manatsara ny fahombiazany ary mampihena ny hamafin'ny asa.
(6) Ny masinina dia mandray ny diloilo afovoany, hahazoana antoka fa ny fanosotra feno ny faritra mihetsiketsika tsirairay avy eo dia manatsara ny fiainam-panompoan'ny masinina.
Masinina CNC manokana ho an'ny valve no tena ampiasaina amin'ny fanodinana Valve, Pump body, Auto parts, faritra misy ny milina fananganana sns. Afaka miasa amin'ny fomba maro izy, ohatra, End end, ny boribory ivelany, ny sisiny eo aloha, ny lavaka anatiny, ny fifohana, ny visy kofehy, Bore-hole ary Sphere. Niara-niasa tamin'ny Huadian CNC Controller （na Siemens, GSK CNC Controller）, afaka mahatsapa automatique, avo lenta, karazany maro ary famokarana betsaka izy io.
Power head dia. (Mm)
Max. Halavan'ny fametahana (mm)
Max.Machining Dia. (Mm)
Spindle Center Hight (mm)
Herin'ny motera (kw)
Spindle hafainganam-pandeha tsy misy dingana (r / min)
X-axis / Z-axis (mm)
Teo aloha: Gantry Type CNC ary atsofony sy milina fanodinana
Manaraka: Lathe Pipe Threading Lathe
Masinina mavesatra adina CNC ary atsofony
Milina fandavahana lafiny tokana